Ama-mobiles aseChina athola isabelo semakethe eSpain | Ezezimali Zomnotho
Ama-mobiles aseChina athola isabelo semakethe eSpain
UJose recio | | Ilondoloza, Ukuxhumana
Imininingwane yakamuva mayelana nokuthengiswa komakhalekhukhwini eSpain ikhombisile ukuthi amadivayisi waseChina athola indawo ngokuthandwa ngabasebenzisi. Lokhu kubonakala ngemuva kombiko owenziwe yinkampani yokuhlaziya imakethe yezobuchwepheshe eCanalys. Lapho kutholakala ukuthi ukuthengiswa kwamadivayisi we-Chinese Huawei kukhuphuke kakhulu ngekota yokuqala yalo nyaka. Ngokukhula kulesi sikhathi ngo-31% uma kuqhathaniswa nesikhathi esifanayo ngonyaka odlule. Ngokwenzayo, le datha ikhombisa ngokusobala ukuthi okwamanje uphawu lwentengiso lwaseChina luthula i- amasheya emakethe asondele ku-24%.
Ngakolunye uhlangothi, esinye sezidlakela zase-Asia kule makethe yezobuchwepheshe siveza nemiphumela engachazwa ngokuthi mihle kakhulu. Hhayi ngeze, Xiaomi ebilokhu imaketha imikhiqizo yayo ezimakethe zaseSpain izinyanga ezimbalwa kuphela, isivele inesabelo semakethe esingaphezudlwana kuka-14%. Yize into ethakazelisa kakhulu ngalokhu kuhlaziywa okusha kokuthengiswa kwamadivayisi ezobuchwepheshe ukuthi phakathi nekota yokuqala yonyaka we-2018 isivele ikwazile ukuzibeka ngaphezu kwemikhiqizo emikhulu yomhlaba efana ne-Apple, enenkomba yokwethembeka engu-12,9% phakathi kwabasebenzisi Abathengi baseSpain. Ngemuva kokuncipha kobukhona bayo cishe ngo-6,7%.
Enye imininingwane efanelekile ekhishwe kulo mbiko ukuthi omakhalekhukhwini abadabuka eChina baphakathi kwamamodeli athengiswa kakhulu ezinyangeni ezedlule. Kuze kube seqophelweni lokuthi amatheminali amane athengiswa kakhulu kulesi sikhathi bangamaShayina futhi ikakhulukazi kusuka kuhlobo lweHuawei. Ngemodeli ye-Honor P8 Lite ehamba phambili kwezimfuno zabasebenzisi bakazwelonke. Amanye amafomethi enze indawo ekhethwayo kuma-mobiles ayishumi aphezulu athengiswa kakhulu yiXiaomi Redmi 4X kanye neXiaomi Redmi Note 4.
Kepha Ama-mobiles aseSpain, yi-BQ kuphela ekwazi ukungena ngesikhundla sesihlanu ezingeni, ebala u-3,6% wezentengiso ezweni.
1 Yethula emakethe ngesethulo esihle
2 Izinhlobo zendabuko zeselula zilahlekelwa umhlaba
3 Izinzuzo zokuhamba kwamaShayina
4 Izithunzi ezethulwe yilezi zinhlobo
Yethula emakethe ngesethulo esihle
Enye yezikhiye zokuqonda le datha enhle kakhulu evela kumadivayisi wase-China isuselwa empumelelweni yecebo lakho lebhizinisi. Lokho wukuthi, ngokuhlushwa kwamaselula okuthiwa ashibhile. Ngamanani angaphansi kwama-euro angama-300 nokuthi bathola ukwamukelwa okuhle kakhulu ngabasebenzisi bezwe lethu, njengoba kukhonjisiwe kule nkomba yokuthengisa. Hhayi ngoba benamanani ancintisanayo kuphela, kepha futhi nangenxa yokubaluleka okubalulekile enakho ezindaweni zayo zokuthengisa noma zokumaketha.
Ngakolunye uhlangothi, iqiniso lokuthi amadivayisi avela kule ndawo yase-Asia angena emakethe kazwelonke ngokushesha kunokulindelwe yizifundo zangaphambilini kule makethe ebalulekile yezobuchwepheshe nakho kuyaphawuleka kakhulu. Kuze kube sekuqedeni ukungabaza okuningana ngekhwalithi yemikhiqizo yayo, kuthola ukwethenjwa kwabathengi, njengoba kufakazelwa ekuhlaziyweni kwemakethe yezobuchwepheshe eCanalys.
Izinhlobo zendabuko zeselula zilahlekelwa umhlaba
Okunye okuhlinzekwa yilolu cwaningo ukuthi lapho kubhekwana nokwanda komakhalekhukhwini futhi Smartphones IsiShayina ukuthengiswa kwemikhiqizo yezentengiso yendabuko kunciphisa ijubane. Esinye salezi zibonelo sivele emiphumeleni eyenziwe yiJapan yakwaSony, ebone ukwehla kwemali engenayo ezinyangeni ezisanda kudlula kusukela ekuthengisweni kwale mishini yezobuchwepheshe. Ngokwehlukile okuthinta imikhuba yabathengi abakhetha ukukhetha amanye amamodeli wokuncintisana kakhulu maqondana nokulingana phakathi kwekhwalithi nentengo.
Ngakolunye uhlangothi, ngaphezu kweHuawei eshiwo ngenhla, kuneminye imikhiqizo eSpain eyenza indlela yayo ekuthengiseni ezabo Smartphones. Ngokwengxenye enkulu, kuqhamuka ezinkampanini ezahlukahlukene zaseChina ezingaziwa engxenyeni enkulu yaseNtshonalanga. Isibonelo, i-Oppo, i-Vivo, i-Xiaomi, i-LeEco, i-Meizu ne-Huawei, phakathi kokunye okuhambisana kakhulu.
Ngoba yize kuyiqiniso ukuthi amanye ala magama kungenzeka angaziwa kubasebenzisi abaningi, akulona iqiniso elincane ukuthi asekelwa ubuchwepheshe obunamandla nobufakazelwe. Ngokwezinga esikhuluma ngalo kwabanye abakhiqizi be-smartphone lokho ukuthengisa okuningi eChina nasezindaweni zalo zemingcele. Ngakolunye uhlangothi, bathola isabelo esikhulu semakethe emazweni aseNtshonalanga, ikakhulukazi iSpain.
Izinzuzo zokuhamba kwamaShayina
Lezi zinhlobo zamadivayisi wezobuchwepheshe zibonakala ngentengo yazo enhle, kepha zisekelwa olunye uchungechunge lwezinzuzo ezisho ukuthi isabelo sabo semakethe asimisi ukuqhubekela phambili eSpain. Hhayi kuphela ngoba banamanani wokuncintisana kakhulu. Kepha ngokulandelayo esikudalula ngezansi:
Bethula amaprosesa athile, okuthi ngaphandle kokuthi aphelele kakhulu, abe nokunye imiphumela eyamukelekayo maqondana nobudlelwano bayo nokusetshenziswa namandla.
Njengoba kushiwo emibikweni ehlukene evela ezinhlanganweni zabathengi, ikhwalithi ye- isikrini Yize zingafani, zingathathwa njengezilungile.
Kuyathakazelisa kakhulu ukuthenga ngezimo lapho abanikazi babhalisele khona imigqa emibili ehlukene ngoba uhlelo lwe-Dual SIM lufakwe cishe kuwo wonke amamodeli.
Ukunikela Iwaranti engafinyelela eminyakeni emi-2 ezitolo eziku-inthanethi ngabahlinzeki baseSpain. Ukuvumela ukulungiswa kwabo uma kwenzeka kunoma yisiphi isehlakalo kumadivayisi abo obuchwepheshe.
Izithunzi ezethulwe yilezi zinhlobo
Ngokuphambene nalokho, ama-mobiles amaShayina nawo angadala enye inkinga ekusetshenzisweni kwawo, ngakho-ke yilokho okufanele ube nakho ngesikhathi sokuthenga. Lezi ngezinye zezinto ezifanele kakhulu futhi ezibhekisa ikakhulu ezingxenyeni zayo.
Kunjalo amabhethri abo awawona amahle kakhulu yazo zonke futhi zivame ukuguga kaningi kunamanye amamodeli.
Uzoba nezinkinga eziningi kufayela lakho le- ngokwezifiso ku-Android ngoba izinsiza zishoda kwezinye izinhlelo zokusebenza.
Mayelana ne- hardware ezethula amadivayisi abo obuchwepheshe avela emikhiqizweni ezimeni eziningi ezingaziwa kahle ngabasebenzisi baseSpain.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Ilondoloza » Ama-mobiles aseChina athola isabelo semakethe eSpain
Shintsha isu lokutshala imali ngesimo samanje
Imiphumela yokutshalwa kwemali kahulumeni omusha e-Italy